October 7, 2021 - Online Hartha
အရှက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား အသက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား မေမေ…
October 7, 2021 by Online Hartha
အမိမဲ့သားရေနဲငါးသွေးမပျက်ပါအမေပေးရက်တာအမေ့ဆန္ဒသံသယဆိုတာမထားပါရစေနဲ့တော့ သားဟာအမေ့သားပါအဖေထားခဲ့တာအမေပါအမေထားရက်တာသားပါအမေသားကို အရှက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား? အသက်ကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား? လွမ်းရေးကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလား? ဝမ်းရေးကြောင့်ပစ်ခဲ့တာလားနားလည်ပါရစေအမေနို့ဘူးထဲကနို့ချိုရည်အမေ့နို့မဟုတ်မှန်းသားသိတယ် နူးညံ့စွာထွေးထားတဲ့လက်အမေ့လက်မဟုတ်မှန်းသားသိတယ်အသက်တစ်ချောင်းနဲ့ လူသားတန်ဘိုးထားပုံခြင်းများမှားနေသလားအမေ…ရယ်ရင်နဲ့လွယ်ထားရတဲ့ကာလ မွေးဖွားရတဲ့ဒုက္ခအမေ့ကိုသနားတယ်ပစ်ပါအမေစွန့်ပါအမေ… အမေ့ကိုသားဗွေမယူပါဘူးအမေထက်သာတဲ့ဂရုဏာရှင်တို့လက်အမေအပ်ခဲ့တာဘဲလေ… အမေတာဝန်ကျေပါတယ်အသေားခံယူချင်တာအမေ့ဆီကမေတ္တာပါသားခံယူချင်တာ အမေ့ဆီကဂရုဏာပါအမေဪသားဘဝမှာမွေးဘကျေးဇူးကိုမမေ့သလိုကျွေးကျေးဇူးတွေဆပ်ရပါဦးမယ် ပုခက်တွင်းကနှလုံးသားရေနဲငါးဖြစ်ပါစေလူးလွန့်ရင်း အသက်ရှင်ရင်ခွင်မဲ့တွေကြားမှာအားဖြစ်သမိုင်းတခေတ်မှာ… အမေ့သား..ဟာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးတော့အမေသိစေချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ Credit Unicode Version အမိမဲ့သားရနေဲငါးသှေးမပကျြပါအမပေေးရကျတာအမဆေ့န်ဒသံသယဆိုတာမထားပါရစနေဲ့တော့ သားဟာအမသေ့ားပါအဖထေားခဲ့တာအမပေါအမထေားရကျတာသားပါအမသေားကို အရှကျကွောငျ့ပဈခဲ့တာလား? အသကျကွောငျ့ပဈခဲ့တာလား? လှမျးရေးကွောငျ့ပဈခဲ့တာလား? ဝမျးရေးကွောငျ့ပဈခဲ့တာလားနားလညျပါရစအေမနေို့ဘူးထဲကနို့ခြိုရညျအမနေို့မဟုတျမှနျးသားသိတယျ နူးညံ့စှာထှေးထားတဲ့လကျအမလေ့ကျမဟုတျမှနျးသားသိတယျအသကျတဈခြောငျးနဲ့ လူသားတနျဘိုးထားပုံခွငျးမြားမှားနသေလားအမေ…ရယျရငျနဲ့လှယျထားရတဲ့ကာလ မှေးဖှားရတဲ့ဒုက်ခအမကေို့သနားတယျပဈပါအမစှေနျ့ပါအမေ… အမကေို့သားဗှမေယူပါဘူးအမထေကျသာတဲ့ဂရုဏာရှငျတို့လကျအမအေပျခဲ့တာဘဲလေ… အမတောဝနျကပြေါတယျအသေားခံယူခငျြတာအမဆေီ့ကမတ်ေတာပါသားခံယူခငျြတာ အမဆေီ့ကဂရုဏာပါအမဪေသားဘဝမှာမှေးဘကြေးဇူးကိုမမသေ့လိုကြှေးကြေးဇူးတှဆေပျရပါဦးမယျ ပုခကျတှငျးကနှလုံးသားရနေဲငါးဖွဈပါစလေူးလှနျ့ရငျး အသကျရှငျရငျခှငျမဲ့တှကွေားမှာအားဖွဈသမိုငျးတခတျေမှာ… အမသေ့ား..ဟာဘာဖွဈနတေယျဆိုတာလေးတော့အမသေိစခေငျြပါသေးတယျဗြာ။ Credit
မတိုးတက်သော ရွာ/ရပ်ကွက်ဆိုတာ ဒီလိုလူတွေရှိလို့ပါ
မတိုးတက်သော ရွာ/ရပ်ကွက်ဆိုတာ ၁။ လူတတ်ပေါ၍ ဆရာများခြင်း ၂။ လူကပ်ပေါ၍ ကန့်လန့်တိုက်ခြင်း ၃။ အမှားကို ဝန်မခံဘဲ အငြင်းသန်ခြင်း ၄။ မှန်တယ်ထင်၍ မတိုင်ပင်ဘဲ ရမ်းလုပ်ခြင်း ၅။ အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှ တွက်ကပ်ခြင်း ၆။ ဗဟုသုတ၊စာဖတ်အား နည်းပါးခြင်း ၇။ ကိုယ်တိုင်ဦးမဆောင်နိုင်ဘဲ သူတစ်ပါးကို အပြစ်ပြောခြင်း ၈။ ညီညွတ်တိုင်ပင်စွာ မပြုလုပ်ဘဲ ကန့်လန့်တိုက်ငြင်းခုန်ုခြင်း ၉။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ နောက်လိုက်ကောင်း မရှိခြင်း ၁၀။ တတ်ယောင်ကန်းများ ပေါများခြင်း ထိုလူများ ပေါများပါက ရပ်ရွာတိုးတက်မှု၊စည်းလုံးညီညွတ်၊သာယာဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ချေ။ လှည်းဘီး နွံထဲ ကျွံနေသည် မင်း မတွန်းရင် ငါလည်း မတွန်းပါက လမ်းပိတ်နေရင် ရောက်လိုသောခရီး အချိန်ကြာတတ်ပါသည်…။ Unicode Version မတိုးတကျသော ရှာ/ရပျကှကျဆိုတာ … Read more
အဖွားရဲ့အမွေအနေနဲ့ သူ့ရဲ့မောင် နှမ မိသားစုဝင်ထဲ က ဘယ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် ကမှ မလိုချင် ကြတဲ့ စောင်အဟောင်း နှစ်ထည်ကို အမွေအဖြစ်နဲ့ သူ ဆက်ခံရရှိခဲ့ ပါတယ်။ “ဒီလောက် ညစ်ပတ် ပေရေပြီး ဟောင်းနွမ်းနေ တဲ့စောင် ကို ငါတော့မလိုချင်ဘူး”…လို့ အစ်မနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ ပြောခဲ့တဲ့စကားကို သတိရပြီး ပြောပြပါတယ်။ မသန်မစွမ်းဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဇနီးဖြစ်သူ Lisa နဲ့ အတူ ကာလီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်၊ Palmdale အ နီးရှိ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အိမ်ငယ်လေး တစ်လုံးသို့ သူတို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ငှါးရမ်းခကိုလဲ ဒေါ်လာ ၇၀၀ အထိ လျှော့ချပေးခဲ့လို့ သူတို့လင်မယား အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀၀ … Read more
မငိုပါနဲ့ အဖိုးနဲ့အဖွားရယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာလို့ကျတဲ့မျက်ရည်ပါတဲ့
စီးပွားတက်မည့်အိမ်နှင့် ရေဆန်အိမ်တို့ ပုံစံများအကြောင်း
စီးပွားတက် မည့်အိမ်နှင့်ရေဆန် အိမ်တို့ဆိုတာ အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနေအိမ် သည် မိမိ အိမ်ထက်မြင့်မည် ခြေရင်းအိမ်သည်လည်း မိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည် အမိုးနိမ့်နေလျှင် အိမ်ပုခက် ဟုခေါ်သည် ။ နေသောမိသားစုသည် စီးပွားတက်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်က အမိုးနိ မ့်မည် ။ ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ အမိုးနိမ့်မည် ကိုယ့်အိမ်က အလယ်မှ အမိုးမြင့်မားနေပါက အိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည် ။ လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက် ထား၍ ပြူစုလုပ်ကျွေးအား သဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကမြင့်မည်။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းက ကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါက အိမ်တောင်တန်း ဟုခေါ်သည် ။ တစ်စိမ့်စိမ့်စီးပွားဖြစ်၏။ ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်း အိမ်က မြင့်နေပါက စီးပွားအသည်းအသန်ရှာရတတ်သည်။ ရေဆန်အိမ် ဟုခေါ်သည်။ ရှေးလူကြီးများက မဝယ်သင့်ဟုဆိုကြ၏ ။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနားတွင် … Read more
ညဖက်ကြီးလမ်းဘေးမှာ လူအုပ်ကြီးလိုက် ဝိုင်းပြီးထမင်းစားနေတာတွေ့လို့ ဘာဖြစ်တာလဲ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
မြေပြင်အခြေအနေ မသိဘဲ အထက်ကနေ အမိန့်စာပဲ ထုတ်နေတဲ့ လူကြီးတွေ သိကြပါစေ….. လမ်းဘေးမှာ ထမင်းထိုင်စားနေကြလို့ အခြေအနေမဲ့တွေလို့ မထင်ကြစေလိုပါ…။ မြန်မာပြည် မြောက်ဖက် အစွန်ဆုံးက ခေါင်လန်ဖူးမြို့လေးမှာ ကျရာတာဝန်ကို သွားရောက် ထမ်းဆောင်ကြမယ့် ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ ဖြစ်ပါတယ်….။ အမိန့်စာတော့ ထွက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတာက မြေပြင်က သူတွေပါ၊ ဆရာ ဆရာမတို့ ကိုဗစ်ကင်းစင်စွာနဲ့ အန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ တာဝန်ကျရာစီ ရောက်ရှိကြပါစေ။ တာဝန်ကျရာ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်သို့ သွားကြသော ဖားကန့်မြို့နယ်ဝန်ထမ်းများအား တည်းခိုခန်းမှာ နေရာမပေးသလို၊ စားသောက်ဆိုင်များတွင်လည်း စားခွင့် မပြုခဲ့သောကြောင့် လမ်းဘေးတွင်သာ အဆင်ပြေသလိုစားလို့ အားဖြည့်နေရပါတယ်…….။ မေတ္တာပို့သခြင်းနဲ့ fighting ပါလို့ပဲတတ်နိုင်ပါတယ်.. ဆရာ ဆရာမတို့ရှင်…။ (ဖူးလေး) Unicode Version မွပွေငျအခွအေနေ မသိဘဲ အထကျကနေ … Read more
လေဖြတ်ဝေဒနာသည်များ အကောင်းအတိုင်းပြန်ဖြစ်စေမယ့် အဖိုးတန်ဆေးနည်း
လေဖြတ်ရောဂါအတွက်ဆိပ်ဖူးပင် ယခုပုံထဲမှာ မြင်နေရတဲ့အပင်ကတော့ ဆိပ်ဖူးပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိပ်ဖူးပင်ဟာ ဆေးဖက်ဝင်သည့် အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးများမှာလည်း ဆိပ်ဖူးကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ အချိုပင်နှင့် အချဉ်ပင် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ဆေးသုံးစွဲနည်း ၁။ ဆိပ်ဖူးပင်၏ ဥကို ထောင်းပြီးလျှင် ထန်းလျှက်အရက်နှင့် တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်ဖြင့် တစ်လခန့် သောက်ပေးပါက လေဖြတ်ဝေဒနာသည်များ အကောင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။ ၂။ ဆိပ်ဖူး၊ မျှစ်၊ ပုဇွန်တို့ကို အတူလုံး၍ ရွဲယိုရွက်ဖြင့် ထုပ်ကာ ချက်စားနိုင်ပါတယ်။ ၃။ ဆိပ်ဖူးကို ပုဇွန်ခြောက်နှင့်အတူကြော်၊ ကျက်ခါနီး ဆန်မှုန့်ရေဖြော်ပြီးထည့်၊ ကျက်သွားအောင်ထပ်ကြော်ပြီး စားသုံးလျှင် အလွန်အရသာရှိပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ၄။ ဆိပ်ဖူးကို မှိုနှင့်အတူ ချက်စားလျှင် အဆိပ်တောက်များကို ပြေစေပါတယ်။ ၅။ … Read more
သနားလှနျးလို့ အဖှား ဘာစားပီးပီလဲဆိုပွီး မေးလိုကျတဲ့အခါ
ကိုယ်အလုပ်စလုပ်ထဲကအဲ့အဖွားကို သတိထားမိတာတော့ကြာပါပီ ဒါမဲ့ကိုယ်လည်းကို့အလုပ်နဲ့ကိုမို့ စကားမစပ်မိဘူးပေါ့နော် အဖွားနဲ့က 🥺ဒီနေ့အဖွားထပ်ရောက်လာတော့ ကိုယ်လည်းဆိုင်မှာ customerလည်း မရှိသေးတာနဲ့ အဖွားဘာစားပီးပီလဲဆိုတော့ အဖွားညထဲကဘာမှမစားရသေးဘူး သမီးတဲ့ အဲ့တာနဲ့အဖွားဘာစားမလဲဆိုတော့ အဖွားထမင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးတဲ့ အဖွားကို လက်ဖက်ရည်ဝယ်တိုက်ပါဆိုလို့ အဖွားနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်းနဲ့အဖွားအကြောင်းမေးမိတော့ အဖွားမှာမြေးနှယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ နှယောက်စလုံးကငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကုန်စုံဆိုင်လေးတခုမှာဈေးရောင်းကူပါတယ်တဲ့ အဲ့ဆိုင်ကသူ့မြေးလေးတွေကိုထမင်းတော့ကျွေးပါတယ်တဲ့ အဖွားကတော့ ထမင်းမစားနိုင်လို့ မစားဘူးတဲ့ စားချင်တဲ့အခါကျလည်း ဝယ်စားလိုက်တယ်တဲ့ 🥺 အဖွားဘယ်မှာနေလဲလို့မေးတော့ ၁၃၃ ဘက်မှာဌားနေတာတဲ့ တလ ၅သောင်းမို့ အဖွားလည်း ဒီလိုထွက်ထွက်ရှာနေရတာပါတဲ့🙁 အဖွားကအခုနေလည်း သိပ်မကောင်းပါဘူး🥺 မြင်တဲ့အတိုင်းဘဲဖိနပ်လေးတောင်မပါပါဘူး (ဖိနပ်လည်း tea shopထဲကအမတယောက်က လှူပေးသွားပါတယ် ) အဲ့တာကြောင့် အကြွေလေးတွေဘဲဖြစ်ဖြစ်တတ်နိုင်သလောက်လေး အလှူခံပါတယ် ညမလည်း လှူမှာပါ🥺 ကိုယ်တိုင်သွားလှူချင်ရင် အဖွားက ၇/၈လမ်းဆုံ .ရွှေသုခ ရှေ့မှာရှိပါတယ်ရှင့်🥺 Ps:အဖွားဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရလားဆိုတော့ ရတယ်ဆိုပီး ဆံပင်လေးကို … Read more